Izimpawu ze-Allergies - GAAPP
Ikhaya>Izimpawu Zokungezwani Komzimba
Izimpawu Zokungezwani KomzimbaIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-23T18:13:07+01:00
Ukungezwani komzimba kuqala lapho i-allergen ingena emzimbeni, idala impendulo ye-antibody. Lapho i-allergen ihlangana nama-antibodies, lawa maseli aphendula ngokukhipha izinto ezithile kubandakanya histamine. Lezi zinto zidala izimpawu. Izimpawu ze-Allergy zifana nesiginali ye-alamu, exwayisa ukuthi kukhona okungahambi kahle.
Izimpawu ezijwayelekile ezihambisana nezimo zomzimba zibandakanya:
ukuqhuma kwe-nettle / isifuba
amehlo alumayo, izindlebe, izindebe umphimbo nomlomo
ukugula, ukuhlanza nokuhuda
ukwandisa uketshezi lwamakhala nolomoya
Ukuthimula kusiza ukusula imigwaqo yomoya ezintweni ezikhonjwe njengeziyingozi. Lokhu kuhlotshaniswa nokuphazamiseka komzimba okunjenge-rhinitis, i-hay fever ne-anaphylaxis.
Kuyisixwayiso sesiginali ye-alamu ukuthi kukhona okungahambi kahle emakhaleni ethu.
Ukuvaleka kwamakhala kungenzeka lapho kukhona ukuvinjelwa ngenxa yokufihla i-mucus, ukuvuvukala kwekhala noma ukukhula kwama-polyp nasal.
I-mucus ekhaleni iyadingeka ukubamba nokunciphisa ubungozi. Amafinyila asekhaleni angaba uketshezi noma aqine, abonakale noma abe nombala.
Kungenxa yokugeleza koketshezi kusuka emithanjeni yegazi kuya ezingqimbeni ezijulile zesikhumba.
Kuyisignali ye-alamu, exwayisa ukuthi kukhona okungahambi kahle emehlweni ethu.
Ukugcwala kwemithambo yegazi ebusweni bezinhlamvu zamehlo kuholela ekubomvu kwamehlo.
Ukukhwehlela kusiza ekususeni imigwaqo yomoya kusuka ezimfihlo noma izinhlayiya zangaphandle ezinjengezilwelwe kanye namagciwane.
Umuzwa wengcindezi yesifuba, lokho kubangela ukuphefumula okunzima. Uyewuzwa lowo muzwa, uma izindlela zomoya zinciphile futhi nomoya ungeke udlule kalula.
Ukuphefumula okuncane noma ukuphefumula
Kuhlotshaniswa nokuphazamiseka okunjenge-asthma ne-anaphylaxis. Kunzima ukuhogela noma ukukhipha umoya. Kuyisiginali yesixwayiso. Ungaba nalo muzwa uma uzama ukuphefumula ngotshani.
Ukucinana kwamakhala noma ukuvinjelwa kwemfihlo yamafinyila ezonweni kungaholela ekhanda.
Imvamisa kuhlotshaniswa nokuphazamiseka komzimba okufana nokungezwani kokudla kanye ne-anaphylaxis. Ukudla okungagaywanga noma ukuhanjiswa okusheshayo kokudla okusemathunjini kungaholela ezitulweni eziwuketshezi.
Lapho uhlelo lokugaya ukudla lungasebenzi kahle uzwa ubuhlungu esiswini, okuvame ukuhambisana nokuhlanza noma uhudo.
Ukuhlanza kunenhloso yokususa okuqukethwe okukhonjwa ngumzimba njengokuyingozi. Kwenzeka ekuphazamisekeni kokungezwani komzimba njengokungezwani kokudla kanye ne-anaphylaxis.
Lapho umoya udlula ngendlela enyinyekile noma evinjelwe umsindo wempempe wenziwa ngesikhathi sokuphefumula. Lokhu kubizwa ngokuthi "ukushayana". Lokhu kuhlotshaniswa nesifuba somoya.
Kuvame ukuhlotshaniswa ne-atopic dermatitis noma i-contact dermatitis. Kubonakala ukubomvu kwesikhumba, lapho imithambo yegazi ivuleka ngenxa yesikhuthazi esiyingozi.
Kuhlala kukhombisa ukuthi kukhona okungahambi kahle. Izamukeli esikhunjeni ziyakhuthazeka futhi ziyimbangela, kungani sifuna ukusikhuhla. (i-atopic dermatitis, i-contact dermatitis)
OKUBALULEKILE: Noma yiziphi zalezi zimpawu zingadalwa ezinye izimo, azikho kulezi zimpawu ezikhetha ukungezwani komzimba nezinye zazo ezingaba zimbi kakhulu. Uma uhlushwa yibo sincoma ukuthi uvakashele udokotela.